I-YouTube kwi-warpath yokwenza iYouTube Kids indawo ekhuselekileyo | Iindaba zeGajethi
Kucacile ukuba iYouTube ibhejile kwifayile ye- usapho friendly ngokomxholo, ubuncinci obunomvuzo kuloo mxholo ekucingelwa ukuba ukulungele ukutyelelwa nguye nabani na. Eyona kona ilungileyo yile i-YouTube yabantwana ngokuchanekileyo, inguqulelo yeqonga elenzelwe ukonwabisa abantwana bethu, i-YouTubers yexesha elizayo kunjalo, nangona kunjalo, ijongene neengxaki ezinzulu.
Yintoni unobangela woku kuphazamiseka? Ewe, ngokuchanekileyo phakathi kweengcinga ezimbi zabasebenzisi abafaka iividiyo kunye neempazamo kwi-YouTube algorithm, abantwana abasebenzisa iYouTube Kids banokufumana imifanekiso engathandekiyo njengePepa Pig ehlasela umvundla ngesandla esixhobileyo. Le yindlela iYouTube ethathe ngayo isigqibo sokuma kumxholo ophazamisayo ngaphakathi kuYouTube Kids, usenza iqonga libe yindawo ekhuselekileyo.
Ukusukela ngoku i-YouTube iza kusebenzisa iifilitha ezintathu ukumisela ukuba ividiyo ingafakwa kwiqonga labantwana beYouTube. Ngaphandle kwento yokuba amawaka abantu abukela umxholo we-YouTube kwihlabathi liphela, amahlwempu akakwazi ukubona yonke into abayilayisha abasebenzisi kwi-intanethi, icacile. I-YouTube nayo iyahlengahlengisa ukuba ngubani onokujonga ezi vidiyo kwiqonga eliphambili, umxholo ophawuliweyo ngokunjalo Uya kuthintelwa kwiYouTube ukuba umsebenzisi obhalisiweyo uthathwa njengangaphantsi kweminyaka eli-18.
Ngapha koko, kuyacaca ukuba akukho nto ifana nokuLawulwa kwaBazali ukunqanda ezi ntlobo zeemeko ezingathandekiyo, okanye kutheni ungatsho, mhlawumbi ukuvumela abantwana ukuba badlale ngeenguqulelo ze-LEGO ezilungiselelwe ubudala babo kuyafundisa ngakumbi kunokuchitha iiyure ezingasebenziyo phambi kwescwecwe sethebhulethi. Ngeli xesha UGoogle uyaqhubeka nokusebenza ekwenzeni iYouTube Kids indawo engcono yabantwana endlini, kwaye kungcono ukuba basebenze nzima, kuba le nkqubo iseluhlaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-YouTube kwi-warpath yokwenza iYouTube Kids indawo ekhuselekileyo